काठमाडौंको मौसम आज पनि धुम्म, कहिलेसम्म यस्तो रहनेछ ? | News Polar
काठमाडौंको मौसम आज पनि धुम्म, कहिलेसम्म यस्तो रहनेछ ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा प्रदुषणका काराण आज पनि भिजिबिलिटी कम देखिएको छ । काठमाडौंको भिजिबिलिटी २ देखि ३ किमीसम्ममा सिमित भएको छ ।
चैतको दोस्रो सातादेखि देशका ७७ जिल्ला मध्य ६० जिल्लामा नै डढेलो लागेपछि त्यसबाट निस्केको धुँवाले काठमाडौंमा वायुप्रदूषण फैलिएको हो । चैत १८ गते विभिन्न ठाउँमा हल्का वर्षा भएपछि घट्दै गएको वायुप्रदूषण अहिले पुनः बढ्न थालेको छ ।
वातावरणविद्हरुका अनुसार वायुप्रदूषणलाई ‘स्वास्थ्य संकटकाल’ भनेर नाम दिएको छ । सुदूरपश्चिमको धनगढीदेखि दाङ, पोखरा हुँदै राजधानी उपत्यकासम्मको वायु गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले मापन गरेभन्दा खतराको तहमा पुगेको विद्हरु बताउनु हुन्छ वायुप्रदूषणको गुणस्तर (एक्यूआइ) ४ सय पीएमभन्दा माथि पुग्नुले काठमाडौंवासीका लागि चिन्ताको विषय बनेको हो ।
डब्लुएचओका अनुसार एक्युआइ ३५ भन्दा तल हुनुपर्छ । ५१ देखि १ सयसम्मको एक्युआइलाई सामान्य मानिन्छ भने २ सय १ भन्दा माथि पुगे धेरै अस्वस्थकर हुन्छ । डब्लुएचओले ३०१ भन्दा माथि पुगे घातक हुने जनाएको छ । तर, नेपालको वायुप्रदूषण ४ सय एक्युआइभन्दा माथि छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार ठूलै हावा नचले र पानी नपरेसम्म अहिलेको वायुमण्डल सफा हुनेछैन ।
नेपालमा चाँडै फायर फाइटर विमान ल्याउन तयारी भएको वनमन्त्री प्रेम ओलेले बताउनु भएको छ । वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालका अनुसार सरकारले अझै केही दिन प्रदूषणमा सुधार नभए मात्र नयाँ रणनीति अघि सार्ने जानकारी दिनुभयो । साथै उहाँले भन्नुभयो तत्काल हामीसँग कुनै पनि योजना रहेको छैन ।
सार्वजनिक यातायातका साधनमा जोरविजोर लागु गर्ने वा उद्योग कलकारखाना बन्द गर्ने मन्त्रालयको योजना नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौं उपत्यकाले अहिले संसारकै प्रदूषित सहरको रुपमा खराब कीर्तिमान राखिरहेको छ ।
आइक्यूएयरको तथ्याङ्कले पछिल्लो साता नेपालसहित एसियाली मुलुकमा तुवाँलोको अवस्था विकराल बन्दै गएको देखाएको छ । वायूप्रदूषणमा हुनुमा नेपालमा लागेको डढेलो मात्र जिम्मेवार नभएर भारतको विभिन्न स्थानमा खेतीबालीका लागि एकैपटक लगाइएको आगोले समेत नेपालमा असर परेको विद्हरु बताउनु हुँन्छ ।
प्रकाशित : चैत्र २५, २०७७, १२:०७:४९